क्याबिनेट बैठक चल्दा हमला गर्ने को ? « Jana Aastha News Online
क्याबिनेट बैठक चल्दा हमला गर्ने को ?
प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७५, सोमबार ११:३०
कसले भन्छ नेपाल संसदीय र प्रशासनिक अभ्यासमा इङ्ल्याण्ड, अमेरिका, भारतभन्दा कम छ ? बिल्कुलै छैन, तर ‘दुश्मन’ हरुको घेराबन्दी यति चर्को कि, पत्याउनै नसकिने ! अहिले नेपाल सरकार यस्तै ‘दुश्मन’ हरुको घेराबन्दीमा पर्दा थालिएको अत्याधुनिक कार्यसम्पादन विधि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।
बिहीबारको क्याबिनेटमा म्याकबुक दिइएपछि सबभन्दा राम्रोसँग र छिटो चलाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) थिए । प्रधानमन्त्रीको हातमा पहिल्यैदेखि थियो, त्यसैले उनले तरिका जानिसकेका थिए । बादलपछि बनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत देखिए, राम्रोसँग चलाउन जानेका । हातमा पर्नासाथ खोलेर फर्रर काम थालिहाले । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितचाहिँ निक्कै बेर अल्मलिए । प्राविधिक हरिप्रसादलाई बोलाएर सोधे, ‘थिच्ने ठाउँ कहाँ छ ? देखाउनुस् त †’ हरिले भने, ‘यो थिच्नुपर्दैैन मन्त्रीज्यू, औँलाले छोएपछि हुन्छ ।’ त्यसपछि उनले पनि चलाउन थाले । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट ओल्टेकोल्टे पारेर हेर्दै थिए । केही समस्या पो भयो कि भनेर प्राविधिकहरु नजिक गए । तर, छेउमै बसेका अर्का मन्त्रीले चलाएको हेरेर गोकर्णले चलाए ।